Meel Ku Qoro: Taariikhda & Saacadda La Ciyaarayo Kulanka Koowaad Ee Clasico Ee Real Madrid Iyo Barcelona - Gool24.Net
Meel Ku Qoro: Taariikhda & Saacadda La Ciyaarayo Kulanka Koowaad Ee Clasico Ee Real Madrid Iyo Barcelona
Taariikhda iyo saacadda la ciyaarayo kulanka ugu horreeya ee El Clasico ee Barcelona iyo Real Madrid ay ku kulmi doonaan xili ciyaareedkan ayaa la soo saaray, waxaanay jamaahiirtu kulankan daawashadiisa dhamaysan doonaan iyadoo qorraxdu soo jeedda.
Ciyaarta ugu horreysa xili ciyaareedkan 2020-21 ee ay awooddooda ku tijaabin doonaan labada kooxood ee ugu waaweyn waddanka Spain ayay taageereyaashu dibedda ka ahaan doonaan oo garoon madhan lagu ciyaari doonaa, waxaanay noqon doontaa mid kaliya laga daawan doono telefishannada dunida.
Sida uu maamulka LaLiga hore u shaaciyey ciyaarta koowaad ee El Clasico ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxay dhici doontaa maalin Sabti ah oo ku beegan October 24, isla markaana saddex maalmood oo kaddib ah marka ay kulamadooda horyaalka naadiyada Yurub ee Champions League dheelaan, taas oo ka dhigan in waqti kooban ay u haystaan inay iskugu diyaarinayaan.
Kulankan oo noqonaya midkii ugu horreeyey ee Ronald Koeman iyo Zinedine Zidane ay iskaga hor yimaaddaan ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka Camp Nou ee Barcelona oo markii ugu dambaysay ay Real Madrid kala soo laabatay farxad xili ciyaareedkii hore.
Inkasta oo maamulka LaLiga aanu si buuxda u xaqiijin saacadda, haddana warbaahinta waddanka Spain ayaa waxay sheegtay in marka ay Saacadda Geeska Afrika ay tahay 5ta galabnimo oo ku beegan 3pm UK ay bilaabmi doonto.
Sababta saacadda loogu doortay ayaa lagu sheegay in LaLiga uu doonayo in dunida oo dhan laga daawado oo waqti ay dadka oo dhan soo jeedaan laga dhigo, taas oo ka caawinaysa inay ka helaan lacag badan, iyadoo si gaar ah loo bartilmaameedsanayo daawadeyaasha qaaradda Asia iyo Bariga Fog oo ay fiidnimo u noqonayso, halka Maraykanka, Woqooyiga America iyo Latin America ay ugu beegmayso subaxnimo, taas oo ka dhigan in dunida oo dhan laga daawan doono.
Ciyaartan ayaa ah mid si weyn loo sugayo, isbeddello badanna ku dhaceen Barcelona oo awoodaha labada kooxood la isku barbar-dhigi doono, waxaana markii ugu dambaysay ee ay kulmeen oo bishii March ahayd 2-0 kusoo badisay Real Madrid oo horyaalkana ku guuleysatay.